ကိုယ် ယုံကြည် တာ ကို ကိုးကွယ် ရုံပါပဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကိုယ် ယုံကြည် တာ ကို ကိုးကွယ် ရုံပါပဲ
ကိုယ် ယုံကြည် တာ ကို ကိုးကွယ် ရုံပါပဲ
Posted by alinsett on Jun 30, 2013 in Arts & Humanities, Creative Writing, History, My Dear Diary | 48 comments
ဘာသာရေး... အမြင်ကြည်ဖို့လိုပါတယ် ။ အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့ စကား
ဘယ်သူ့ ပေါင်မှ သွားး လှန်မထောင်းရဲလို့ကိုယ့်ပေါင် ပဲ ကိုယ် လှန် ထောင်းပြပါဦးမယ်။
ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကိုးကွယ်မှု လွဲမှား နေတဲ့ အဖြစ်တွေ စင်ကြယ်စေချင်ပါတယ်လေ ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ရုပ်တု ကိုးကွယ်မှု ဆိုတဲ့သဘောထားဆီကနေ တဖြည်းဖြည်း ရှောင်ခွါသလို ဖြစ်လာပြီ ။
ကိုယ် ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားဟာ ကိုးကွယ်ထိုက်တဲ့ ဘာသာတရား ဖြစ်ရဲ့လား။
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း သီလ / သမာဓိ / ပညာ မြင့်မြတ်စင်ကြယ် ရဲ့လား ဆိုတဲ့ သဘောထားနဲ့ အတော်လေး ရွေးချယ်နေမိတာ ပါ ။
ပုဂ္ဂိုလ် စွဲ ဝါဒစွဲ ဂိုဏ်းစွဲ က စလို့ ဘာအစွဲမှ လည်းးး စွဲ မထားချင်ပါဘူး ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဖြင့် တရားကိုတောင် မစွဲ ဖို့ 
ဘုရားကပြောတာပဲ ဆိုပြီးတောင် မယုံဖို့ …… ဆိုထားတော့ ကျွန်တော် တော်တော် သဘောကျခဲ့တာ ။
အမှန်တရား နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာတရားပဲ ဆိုပြီး အသက် ၁၉နှစ် လောက်က စ ကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ် ။
ကျွန်တော် က အုန်းသီးခြောက် ကို ရှိခိုးချင်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူး ။
ဦးရှင်ကြီးတို့မနှဲလေးတို့အကြောင်းက်ိုလည်း (အပျင်းပြေဇာတ်လမ်းတွေ ဖတ်သလို သာ) လေ့လာခဲ့ပြီး ကိုးကွယ် အားထားစရာလို့လည်း မမြင်ခဲ့ဘူး ။
သူတို့အလို မလိုက်နိုင်ရင် ကိုင်တယ်တို့ /့ ငြိုးတယ်တို့လုပ်တတ်တဲ့ ခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်းမရှိတဲ့ … အဲဒီ သေပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကိုးကွယ်စရာလို့မမြင်ပါဘူး ။
သူတို့ မရှိတော့ တဲ့ အခုအခါမှာ….. ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကျိုးအတွက်လည်း ဘာအဆုံးအမများ ထိထိရောက်ရောက် ချန်ထားခဲ့လို့လဲ ။
နတ်ရုပ်တုကိုးကွယ်မှုဟာ ဝေဖန်ပိုင်းခြား နိုင်စွမ်းနည်းသူတချို့ရဲ့ အကြောက်တရား ကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ ကိုးကွယ်မှု လို့ မြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ပါ ။
မသိနားမလည်သေးသူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်လို့လည်း..ယူဆချင် ယူဆပါပေါ့ ။
ကျွန်တော်က နတ်ရုပ်တု ကိုးကွယ်မှုကို မယုံကြည်ပေမယ့် ယုံကြည်သူတွေ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လုပ်ကြ
ကိုးကွယ်ကြတာတော့ ဘာမှ ဝေဖန်နေမှာလည်း မဟုတ်ဘူး ။
ကန့်ကွက်ပြစ်တင်နေမှာလည်း မဟုတ်ဘူး ။
နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီး နေမှာလည်း မဟုတ်ဘူး ။
ကျွန်တော့်ဘက်က ဘာမှ လည်း လုပ်ခွင့်မရှိဘူး ။
ကိုယ် ယုံကြည်ရာ ကိုယ် ကိုးကွယ် ။
သူ့ ကိစ္စ နဲ့ သူ ။
ကိုယ့် ကိစ္စ နဲ့ ကိုယ် ။
အနေသာကြီး ပါ ။ ဥပေက္ခာ ပြု ထားလို့ ရတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဟိုတလောက တော့ ……………
ကျွန်တော့် ကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက် ပုတ်ခတ်လာတဲ့ အဖြစ်တစ်ခု နတ်ကိုးကွယ်မှုကနေ ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။
တခြားသူ နဲ့ဖြစ်တာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့် အိမ်က ကိုယ့် မေမေ ကြောင့် စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ် ရတာပါ ။
ကျွန်တော်တို့ မိသားစုမှာ ဖေဖေနဲ့ကျွန်တော်က နတ်ကိုးကွယ်မှုကို မသိကျိုးကျွံ ပြုနေကြပြီး ကျွန်တော်တို့နဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှုကို မဆိုင်သလိုနေတာပါ ။
( နတ်ကိုးကွယ်မှုဆိုတဲ့စကားထဲက နတ်ဆိုတာ ဟို ၃၇ မင်း နတ်စိမ်းတွေကို သာ ဆိုလိုပါတယ်။ )
အဲ…………… မေမေနဲ့ မေမေ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ကျွန်တော့် ညီ ညီမ တွေ မေမေ့ရဲ့ မောင် ဖြစ်သူ တို့ကတော့…..
မိရိုးဖလာ ထုံးတမ်းစဉ်လာကို မလွန်ဆန် မပယ်ရှားဝံ့ သူတွေ ပီပီ နတ်စိမ်း ကိုးကွယ်မှုကို စွဲက်ိုင်ထားတုန်းပေါ့ဗျာ ။
သူတို့ဘာသာ သူတို့အုန်းသီးခြောက် ထိုင်ကန်တော့တာ ဘာဖြစ်လဲ ။
ကိုယ် မလုပ်ချင် မလုပ်ရုံပဲ ။
ဟိုနေ့ ကမေမေက ဦးတင်ကြီး ရှင်ပါတယ် ။
အဲ….. မှားလို့ဦးရှင်ကြီး တင်ပါတယ် ။
ဦးရှင်ကြီး တင်ရင် အဘိုးးးးးအဘိုးးးးဆိုပြီး ပင့်တယ်။
ရွတ်ဖတ် တယ်။ ပြင်ဆင်ပြီး ပူဇော်ပသ တယ်ပေါ့လေ။
ဦးရှင်ကြီးကို သာ ကိုးကွယ်ရာ လို့ မယူဆတာာာ ။
ကျွန်တော်က….( ဦးရှင်ကြီး လာမစားနိုင်ပဲ ပူဇော်နေရတဲ့ ) မုန့်ဆန်း ကိုတော့ အတော်ကြိုက်တယ်။
ဦးတင်ကြီး မရှင်ပဲနဲ့ အိမ်မှာ လုပ်မစားရဘူး ဆိုလို့ဦးတင်ကြီးရှင်တဲ့ နေ့ ဆို မုန့်ဆန်း စားရလို့ပျော်တယ်။
အဲဒီနေ့ ကလည်း မနက်အစောကြီး ထပြီး မေမေနဲ့ ညီတွေ ညီမတွေ ဦးတင်ကြီး ရှင်ဖို့ ပြင်ကြ ဆင်ကြ နဲ့ တင်တယ်ပေါ့လေ။
ကျွန်တော်ကလည်း မုန့်ဆန်းစား ရပြီဆိုပြီး ပျော်တယ်ပေါ့လေ ။
ဦးရှင်ကြီးကို ပင့်ပြီးလို့ထိုင်ကန်တော့ ရမယ် ဆိုတဲ့အချိန်မှာ မေမေက ကျွန်တော်နဲ့ ဖေဖေ့ကို လှမ်းခေါ်ပါတယ် ။
ဦးတင်ကြီးရှင်တိုင်း ကန်တော့ရမှာ စိုးလို့ ပတ်ပြေးနေကျဆိုတာ သိ သိကြီးနဲ့ 
ကျွန်တော်တို့ အယူအဆများပြောင်းလဲ ပြီ ထင်ပြီး ကန်တော့ဖို့ခေါ်တာလေ ။
ဘယ်ရမလဲ မေမေရယ် ။
ဦးရှင်ကြီးဆိုတဲ့ လူကြီး အဲ…… နတ်စိမ်းကြီး ကို မကန်တော့ပါရစေနဲ့။
သူ့ ဘာသာသူ ရေငန် ပိုင် ကြီး ဆိုဆို ။
အဘိုး ပဲ ဆိုဆို မကန်တော့ချင်ပါဘူး ။
သူ့ ကျေးဇူးလည်း ကျွန်တော်တို့ အပေါ် ဘာမှ မရှိဘူး ထင်တာပဲ မေမေ ။
ပြီးတော့ သူကသာ ရေငန်ပိုင် လုပ်နေ ။
တစ်တိုင်းပြည်လုံး ကို ပိုင်နေတာ ဘယ်သူတွေ လဲ….
အပိုင်စီး ဖို့ ကြိူးစားနေတာ ဘယ်သူတွေ လဲ …… ဆိုတာ သားတို့ မြင်နေတာပဲ မေမေ ။
အဲဒီ ဦးဦးကြီး တော်ရာ မှာ သွား နေ ။
သားတို့လည်း တော်ရာမှာ နေမယ် ။
စိတ်ထဲက အဲသလိုတွေးပြီး ထုံးစံအတိုင်း မသ်ိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပတ်ပြေး ပါတယ်။
ဦးရှင်ကြီးကို ကန်တော့ ရမှာစိုးလို့ရှောင်ထွက်တာ ။
မေမေ့ရဲ့ မကြားတကြား စွပ်စွဲသံက နားဝ ကို ပြေးဝင်လာတယ်လေ။
မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်မှု ကို ဆန့် ကျင် ကြတဲ့ မိစ္ဆာဒိဌိ တွေ တဲ့ ။
ဟိုက် လို့ အော်ပြီး မေမေ့ကွယ်ရာ မှာ ရယ်နေမိတယ် ။
ကျွန်တော် ဦးရှင်ကြီးကို မ ကန်တော့တာနဲ့မိစ္ဆာဒိဌိ အယူမှားယွင်းသူ ကြီး ဖြစ်သွားပြီလား မေမေ လ်ို့ တွေးမိတယ်။
မှားတယ်လို့ မေမေ မြင်လည်း မြင်ပါတော့ ။
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာ ကိုယ်လုပ်မှာပဲ.. ။
အချိန်တန်ရင် အမှန်တရားက အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။
နောက်နေ့ က စပြီး အခုထိ ကျွန်တော် ဦးရှင်ကြီးနဲ့ ပက်သက်ပြီး မေမေ့ကို ဘာမှ ပြောမနေပါဘူး ။
နတ်ရုပ်တု ကိုးကွယ်မှုက ….ဘာဖြစ်တယ်.. ညာဖြစ်တယ်… ဆိုတာတွေ လည်း ပြော မနေပါဘူး ။
ကိုယ့် အရာလည်း မဟုတ်ဘူး ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့ နောက်ပိုင်း ကနေ ဒီနေ့ အထိ ညတိုင်းးလိုလို တရားအခွေတွေပဲ လှိမ့် ဖွင့် နေမိတယ်။
ည ဆို မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဝိပဿနာ အလုပ်ပေးတရားတွေကို ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး ဖွင့် ပြီး မှတ်သား နေလိုက်တယ်။
မေမေ ကတော့ ကြားနေတယ်။
မှတ် သင့်တယ် ထင်ရင် မှတ်ပေါ့မေမေ ။ ကိုးကွယ်ရာ အစစ်က . . . . .
ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ လူတစ်ဦးချင်းစီနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။
လူမျိုးအစုံတွေမှာ ကောင်းသူ ဆိုးသူ ရှိပါတယ်။
ဘာသာရှိ ဘာသာမဲ့ ကိုးကွယ်သူထဲမှာလည်းပဲ ကောင်းသူဆိုးသူ ရှိပါတယ်။
ကုန်ကုန်ပြောရရင် တစ်မိသားစုထဲမှာတောင် ကောင်းသူဆိုးသူ ရှိတာပဲ။
တံဆိပ်တွေတပ်ပြီး စွပ်စွဲပြောဆို ရန်ဖြစ်မုန်းတီးနေကြမယ့်အစား လူတစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီက ကိုယ့်စည်းကိုယ်လုံအောင် ကိုယ့်တာကိုယ်ထိန်းကြရင် အေးချမ်းသာယာမှုတွေ ခံစားကြရမှာပေ့ါ။
ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ခွဲခြားမုန်းတီးမှုတွေ မကြာခဏကြားနေရတာ စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းလွန်းလို့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတွေ့မိတဲ့ လူသားဆန်တဲ့ လူသားစကားတွေကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ကြဖို့ အောက်မှာ လင့်ခ်လေးတွေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
အကျိုး လိုလားမှု ကြောင့်သော်လည်းကောင်းးးး
(အကျိုးလိုလားမှု ဆိုတာကိုလည်း..အကြောက်တရားကြောင့် ဆိုတဲ့စာရင်းထဲပဲ.ထည့်ချင်ပါတယ် ။
အကျိုးလိုလားတယ်ဆိုကတည်းက ဆင်းရဲ ဒုက္ခကို ကြောက်လို့ပါ ။)
ရှေးရှေးတုန်းက.. ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို… ဖက်တွယ်ထားသူတွေ ကို ကြည့်မရဘူး ။
အမှားအမှန် ခွဲခြား တတ်လာတဲ့လူတွေရဲ့ 
ဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရပ်ကို…
သူတို့က တစ်ပြန် ပြစ်တင် ပုတ်ခတ် တတ်တဲ့သူတွေကို တွေ့ ဖူးတယ် ။
သူတို့လို.. ဘိ်ုးတော် / နတ်စ်ိမ်း ….. မကိုးကွယ်တာကပဲ..အပြစ်ကြီးတစ်ခုလိုလို..
တကယ့် ဘာသာတရား အစစ်က ဘာလဲ…
ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ … အမှန်တရားကို မရှာဖွေ ကြတတ်သူတွေ … အများကြီးပဲ ။
ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်း မိတဲ့ အထိ… ပြောတာပဲ..။
ပြီးတော့… အသက် 19 နှစ် မတိုင်ခင် အထိ….
မိဘ ဘိုးဘွား.. ကိုးကွယ်တဲ့ အတိုင်း.. ဘာသာရေး လက်ဆင့်ကမ်း ခံယူမှု ကနေ..ခွဲထွက်ပြီး..
ဘာသာမဲ့အဖြစ် …
ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သင့်လဲ..လို့ရွေးချယ်နေခဲ့တာ…..။
နတ်စိမ်းကိုးကွယ်မှု တိုက်ဖျက်တဲ့ တရားဟောတဲ့ထဲမှာ ဦးသုမင်္ဂလ/ ဖြူးမဟာစည်ဆရာတော် တရားတွေ ကောင်းပါတယ်။
မေမေ့ကို ကြားလောက်တဲ့ နေရာကနေ မကြာခဏဖွင့်ပြပေးပါ။
သရဏဂုံ မတည်တဲ့ မိဘကို သရဏဂုံတည်အောင် လုပ်ပေးတာ မိဘ ကျေးဇူးဆပ်ရာရောက်ပါတယ်။
အန်တီ ပဒုမ္မာ ရေ
ဦးသုမင်္ဂလ တရားတွေလည်း အိမ်မှာ နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က ဝါဆိုလပြည့် နေ့ တုန်းက တော့
မှော်ဘီက ဆရာတော့် ကျောင်းအထိ သွား ဖြစ်တယ်။
ဝိပဿနာ အလုပ် ကို လုပ်ရင်းး
ခန္ဓာ ရဲ့ဖြစ် ပျက် သ ဘော တွေကို
သိ မှတ် ဆင်ခြင် တဲ့အခါ
လက်တ လော အကျိုး ကျေးဇူး အနေနဲ့
ငြိမ်းချမ်း မှု နဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ရ လို့ 
အဲဒီ အရ သာ ကို မေမေ့ ကိုလည်း ရ စေချင်တယ်။
နောင်အနာဂတ် မှာ ဖြစ်လာမှာတွေကို မျှော်ကိုးပြီး လည်း
အတိတ် က ဖြစ်ရပ်တွေ အတွက်လည်း ခံစား မနေချင်
အခု ဆိုတဲ့ အချိန်ကလေး ကို ပဲ ကျေကျေနပ်နပ် နေထိုင် နိုင် ဖို့ 
အစ်မ အိမ်ထောင်ကျပြီး နယ်ကိုပြောင်းလာတော့ ယောက္ခမတွေလည်းမရှိတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့ နတ်အုန်းသီးကို အမှိုက်ပုံမှာသွားလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒါ တစ်လမ်းလုံးက လူတွေ အစ်မကို စကားမပြောကြ တော့ဘူး။ မအူပင်ဟာ တစ်စက်မှ နေချင်စရာမကောင်းဘူး သိလား။
အစ်မ ပြုံး ရေ
သတ္တိ ရှိ လိုက် တာ
နတ် ကိုင်မှာ မကြောက် ဘူး ပေါ့နော် ။
မအူပင်က နေလို့ကောင်းမယ့် မြို့ လေးပါ အစ်မရယ်
အတွေး အခေါ်နဲ့လွဲ ချော်မှု တွေ က မြို့လေးကို
ဆိုတော့ . . မိုးသီးဇွန် ကိုနေ့တိုင်း ထိုင်ကန်တော့ သင့်တယ်ဗျ . . . .သူဂျီး ပြောဖူးတယ် . . သူ့ကျေးဇူး တွေ . . တော်တော် ကြီး ဆိုပဲ . . .
ကို လု လင်
ဖတ် ရှု ခံစား ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး ပါ ။
ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဟာ.. တခြားမည်သူ့ကိုမှကိုးကွယ်စရာမရှိ…
အတ်တာဟိ အတ်တနော နာထော ပေါ့နော် ။
ဆိုတော့ ကိုယ့် ကိုယ် ကို ကိုယ် ပြန် အားကိုး ရဖို့ 
ကိုယ်တိုင်ကလည်း အားကိုး ထိုက် လောက်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိဖို့လိုတယ် ပေါ့နော် ။
ဆက် တွေးပါဦးမယ် ။
တို့ဆီက လူတွေ မရှိကြတာ အဲဒီ စိတ်လေးတစ်ခုပဲ.။
ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူ၊ ရန်သူ လုပ်နေသရွေ့…………….
ဆွေးနွေးတာနဲ့ ရန်ဖြစ်တာ မကွဲပြားသရွေ့……………
မမ ခိုင်ဇာ ရေ
ဆွေးနွေးတာနဲ့ ရန်ဖြစ်တာ မကွဲပြားသ၍
ဆန့်ကျင် ခြားနား စွာ ရှိခြင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ချေမှုန် ခြင်း မကွဲပြားသ၍
ဒါမျိုးဆိုတာ ကြီးလာမှ ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ် ကောင်းတယ်ကွ.. အချို့အရာတွေက အသက်အရွယ်နဲ့ ဆိုင်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကာရန်မဲ့ ကွန်မန့် ပါလား ။
ချစ်သော ဦးကြောင်ရဲ့စကားလေးကလည်း မှတ်သား ထားသင့် တဲ့စကားပါဗျာ
မှန်ပ..သများတို့လဲ အိမ်မှာ ၃၇ မင်းတင်ရင် ကောက်ညင်းပေါင်း၊ ပြန်ပေါင်း နဲ့ငါးကြော်
အဖွားက ကန်တော့ခိုင်းရင်တော့လဲ ကန်တော့လိုက်တာဘာဘဲ…စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့
အမေတို့လက်ထက်ကြ ဘာနတ်မှ မကိုးကွယ်ကြတော့…နားအေးတာဘဲ ;-)
ဆွိ ပြောသလို ရန်ဖစ်ခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်း မကွဲပြားသူများနဲ့တော့ လေကုန်ခံပီး ပြိုင်မညင်းဘာ…ေိေိ
ငြိမ်းချမ်း လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲ ပြီး
ကိုယ့် အကန့်နဲ့ ကိုယ် ယုံကြည် သလို
နေထိုင် ကြစို့ ပေါ့နော့်
ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု ဆွေးနွေးမှု အတွက်
ကိုယ်ကပင်လယ်ထဲရှိနေမယ် လှေတစ်စီးပေါ်မှာ လှိုင်းကကြီးနေမယ် လေကထန်နေမယ်
အဲ့သည်အချိန် ဦးရှင်ကြီးကို နတ်စိမ်းနတ်ကြက်ဆိုပြီးပြောရဲမလား ??
ကိုယ်က မသာအိမ်မှာဖဲရိုက်နေမယ် ကိုယ့်ဘေးအုန်းငှက်ပျောပွဲရှိမယ်
ကိုယ့်ဖဲကသေနေတယ် ဖဲရှုံးနေတယ် အဲ့ချိန်ပြောရဲလား နတ်စိမ်းနတ်ကျက် ??
ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်ပါ ကိုယ်ဒေါ်ဒေကို မစော်ဂါးဘါနဲ့
ကိုယ်ဒေါ်ဘစ် ကိုယ်ဒေါ်စမောလ် များခင်ဗျား
ဆရာကြီးသော်တာဆွေကတော့.. သူများအ်ိမ်ကမင်းမဟာဂီရိနတ်အုံးသီးကို..ဖြုတ်ချ… ဘောလုံးလုပ်ပြီးကန်ဖူးတယ်..။
အမှန်ကတော့… အဲဒီမမြင်ရတဲ့အကောင်ဘလောင်..အစိမ်းအကျက်တွေအစား.. လက်တွေ့လောကထဲက ..လူသားတွေကို.. အပြန်အလှန်လေးစားသမှုတော့ရှိရပါမယ်..။
သူကထိုင်ကန်တော့နေတာကို.. ကိုယ်က.. ဘောလုံးလုပ်သွားကန်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလည်း…။
သတ္တ၀ါ..တိရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်း.. လူကို “မူလတိုင်”ထားပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံရသင့်တာပေါ့..။
တလောကလေးတင်.. ရှင်ပြုပွဲတခုမှာ.. ကျုပ်လည်း.. အုန်းပွဲငှက်ပျောပွဲကိုင်ပြီး.. ဘုန်းကြီးကျောင်း ၃ပါတ်ပါတ်လိုက်ရသေးတယ်..။
နောက်မထူးပါဘူး.. ဓာတ်ပုံသမားတွေအဆင်ပြေအောင်.. ၂ပါတ်လုပ်ရော…။
ပြည့်ခါနီးလေးမှာ.. ဘုန်းကြီးတပါးက.. ၂ပါတ်(စုံ)မဖြစ်ဖူး..၃ ပါတ်လုပ်လိုက်လို့.. ၃ပါတ်ဖြစ်သွားတယ်..။
တော်သေးတာက.. နောက်ဆုံးတပါတ်.. အုန်းပွဲကိုင်ကနေ.. ဆင်းတုထီးတော်မိုးအလုပ်ပြောင်းလိုက်သမို့..တော်သေးတယ်..။
လူသားပဓာန ကို သဘောကျပါကြောင်းးး
ပုရာငွေမို့ သဲရေစို့ ပါတဲ့ ပဲရွေမြို့ အပိုင်၊ အောက်ခရိုင် ကျောက်တိုင်သည်ဘက်၊ ရွေစောင်းညှိ လိုက်တော့၊ ရေကင်းအထိ ပိုင်ပေသော၊ ခရိုင်ကျော်ဇမ်ဗူ၊ ပြိုင်လာသူ တကယ်ရှုံးလောက်အောင်သတင်းဖြာ သည့်၊ ကဇင်းရွာ ယင်းဌာနဆီက၊ မယွင်းမကွာသပ၊ အလွန်မျှော်ကိုးပြီး၊ ကျွန်တော်မျိုးတို့ ရပ်ရွာသို ၊ နတ်ရာဇာ ကိုယ်တော်ကြွခဲ့ပါ့၊လို့ သော်တခဏ အမွန်းတင်၍ ကွန်းစင်မြ ကျောင်းဝိဟာရသို့ ၊ အပေါင်းတပည့်များ ခြံရံတသင်းငယ်နှင့်၊ ရေငံမင်း တကျွန်းပိုင်၊ ကွမ်းအဆိုင် ဆွမ်းထိုင်လို့ သုံးပါတော့၊ ဘုန်းရှိတဲ့ နတ်ရာဇာ၊ ကြွလာတော်မူပါ နတ်ဦးရှင် ခင်ဗျား၊၊
အော် ချစ်သော ဂီ
ကနားစီး ပီသ ပါပေ့
ချက်ချင်းကို ပင့်တော့တာပဲ ။
နာဂစ်တုန်းက ဦးရှင်ကြီး ဘယ်သွားနေလဲ မသိ
အခု ပင့်လည်း လာရင်တောင် ဝမ်းနည်းမှုတွေ လက်ကျန်သိမ်းထုပ်ပြီး
နာဂစ်တုန်းက သူ့ ကို ပူဇော် ပသ ကြတဲ့ လူတွေ
သူ မကယ် မ မ နိုင် ခဲ့ လို့ လေ
အဟိ အုး အူး အုပေါင်
ကိုယ် ယုံကြည်ရာ လေး ကိုယ် ဖွင့်ပြောမိတာပါ နော်
မယုံကြည် မှု နဲ့ တော်ရာမှာ နေပြီး စော်တကားမော်တကား လုပ်ရပ်တွေ နဲ့တော့ မ နေ ပါဘူးလို့ ။
ဒါက သူ့ အကန့် နဲ့ ကိုယ့် အကန့် ခွဲခြား ထားခြင်း လောက်ပါပဲ။
မတူကွဲပြား ခြားနားစွာ နေခြင်းပါ ။
ငါ့ အယူအဆ နဲ့ မတူ ဘူးဆိုပြီး ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ခြင်း ကို ဦးမတည်ပါဘူး လို့ ။
နတ်စင်ကို ရှူး ပန်းတာ တို့ 
နတ်တွေကို ကလော် ဆဲ နေတာ တို့ မလုပ်ဘူး ။
မလုပ်တာဟာ နတ် ကိုင်မှာကြောက် လို့ လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မလုပ်သင့်လို့ မလုပ်တာ ။
နတ် အကိုင် ခံရတယ်
နတ်ကို စော်ကားလို့ တစ်ခုခု ထိခိုက် တယ် ဆိုတဲ့
ဦးဘဟန် ကြောင့် ဦးဘရောက် တဲ့ ကိတ်စ ကြီးကိုလည်း
စကား ထဲ ထည့် မပြောချင်သေး
စိတ်ပညာ သဘောတရား အရ ကြည့်ရင်
နတ်စင်ကို တစ်ခုခုလုပ်လို့လုပ်သူ တစ်ခုခု အနာတရ
နတ်ကိုင်တာ လို့ ယူဆ တာ မှားပါတယ်။ သဘာဝ မကျ ပါဘူး ။
နတ်စင်ကို စော်တကား မော်တကား လုပ်လို့ 
သူ ဒုက္ခ ရောက်တော့မှာ
ဒုက္ခရောက်ပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့
မေတ္တာ ပို့သလို
အထင်အမြင်စိတ် တန်ခိုး ကြောင့်
နတ်စင်ကို လုပ်သူရဲ့ စိတ်ထား မခိုင်မာ ရင်
ဦးဘ ရောက်တာပါပဲ ။
ဒါလောက်ပဲ ပြောတော့မယ် ။
ဦးကြီး မိုက် ရေ
ကို အလင်းစက်ရေ အဖြစ်ချင်း တူသဗျ… ကျွန်တော့် အမေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သားအဖလည်း အဲ့အတိုင်းပဲ.. ကျွန်တော်ကတော့ အမေ စိတ်ချမ်းသာပါစေ ဆိုပြီး.. အဲ့စင်ရှေ့ သွားတော့ ကန်တော့လိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ.. မြတ်စွာဘုရားကိုပဲ ရည်စူးပြီး ဦးချလိုက်တာ….ပဲ…..။ အမေလည်း ကျေနပ်သွား… ကျွန်တော်လည်း ကိုယ် မတော့ချင်တာကို ကန်တော့တာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ………။ ။
မတွေ့ တာတောင် ကြာပေါ့ ။
ပတ် ပြေးတဲ့ စနစ်ပဲ သုံးနိုင်သေးတယ်
အစ်ကိုရေ .. နာမည်မှာ လက် အကျင့်ပါပြီး စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့.. ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ…
ကိစ္စ မရှိပါဘူး ဗျာ ။
ကျုပ်ဟာကျုပ် အေးအေး နေတဲ့ သိကြားမင်းကို
အဲဒီ အသူရကာယ် လိုလို နတ်စိမ်း လိုလို ဟာတွေထဲကို ဆွဲထည့်ထားတာ
ကျုပ်ကတော့ နတ်မှ နတ် စစ်စစ် ဗျ
သုံးဆယ့်ခွင်နမင်းမှာ ဘူက ထိပ်ဆုံးပါသလဲဗျ.
ဒီ နာမည်ကြီးနဲ့တွေ့ နေမှ တော့…
37 မင်း ထဲ မပါဘူးဆိုတာ.. သိသာပါတယ်တွာ..။
ဒါပေသိ … နီ့နာမည် မြင်ရင်…ကော်ဖီ သောက်ချင်တယ်..။
သိကြားမင်းဆိုတာ အပြင်-၃၇မင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါသဗျ..
ကျုပ်ကို ထိပ်ဆုံးကနေ ခေါင်းဆောင် လုပ်ထားသလေ
ကျွန်တော်တော့ မိရိုးဖလာကိစ္စ တွေအကုန်လုပ်တယ် ..
၀ါဝင်ဝါထွက် ဆွမ်းတင်တယ် နတ်တင်တယ် အဆင်ပြေရင်နတ်စားတယ်
နှစ်ကူးတယ် …အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ….ဒါပေမဲ့ မြတ်စွာဘုရားကတော့ အဓိကအားထားရာပါ
ချစ်သော ဦးဦး ကြိမ်ရေ…
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တစ်ခု / မိရိုးဖလာဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခု / ခေတ်အဆက်ဆက် ယုံကြည် ပြီး..လုပ်လာတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု…မို့ …
မလုပ်လိုက်ရတဲ့ အခါ..စိတ်ထဲ .မှာ.. တင်မကျနဲ့ ….
အဲဒီ လို မတင်မကျ နဲ့ .. ..ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေက…
တစ်ခုခု ဖြစ်လာဖို့ .. ဥင်္ီးတည်ပါတယ် ။ တစ်ခုခု အခြေအနေဆိုးတာလေး.ဖြစ်သွားရင်တောင်…
ကိုယ်.. လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လေး.. ပျက်ကွက်ခဲ့တာကိုး…ဆိုတဲ့ အတွေးလည်း.၀င်တတ်ပါသေးတယ်။
ဒီတော့.. အဲဒီ စိတ်အခြေအနေနဲ့ .. မတည်ငြိမ်နိုင်တာထက်….
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို လုပ်လိုက်တာက ပိုစိတ်ရှင်းတာပေါ့နော် ။
တချို့ ဆို… တစ်ခုခု ဆိုးတာ ဖြစ်ရင်..
ဘုရား အဆုံးအမကို အရင် သတ်ိမရ….
ဖတ်ရှု ဆွေးနွေးမှုအတွက်.ကျေးဇုးပါနော့် ။
သား အလက်ဆင်းရယ် သားဂိုအမေစောင်မကြည့်ရှု…အဲလေ စောင့်ရှောက်နေဒဲ့ကျေးဇူးမှမထောက်…
အမေ၀ါး အဲလေ… အမေဂျမ်း
စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှု ပေးတာကိုတော့..ကျေူးးဇူးတင်ပါတယ် ။
အိုင်ဖုန်းလေးတစ်လုံးလောက်.. မ စပါ အမေ….
ချစ်သော Wow ရေ…
ဖတ်ရှု သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးနော် ။
ဘပု ပြောတာ လေး ကို တော့ အလွန့် အလွန် အလွန် အမင်း သဘောကျကြောင်းလေး စ ပြောလိုပါတယ်။ (ဖား တာ)
အမေ့ မှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် က အကြောင်းကြောင့် ဒီလို စိတ်မျိုး ရခဲ့တာ နေမှာပါ။
တိုက်ရိုက် ကဲ့ရဲ့ အပြစ်တင်လိုက်တာထက် ဒီလို မသိမသာ ပညာပေးတာလေး အတွက် အလင်းဆက် ကို ချီးကျူးပါတယ်။
အဲဒီလို နတ်တွေ မရှိဘူး လို့ ရာနှုန်းပြည့် သက်သေ မပြနိုင်သ၍ ရှိနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ရာနှုန်း လဲ နဲနဲ ပါနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ လောဂျစ် လေး ထည့် ထားရင်
ကိုယ့် စိတ်အင်အားကို ရတဲ့ နည်း နဲ့ လုံခြုံမှု ယူနေသူ တွေ ကို နားလည်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ယုံကြည်တာ၊ ကိုးကွယ်တာတွေ ဟာ အများသူငါ ကို မထိခိုက် သမျှ ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရပ်ကွက် ထဲ မှာ ကိုယ့် အိမ်က အကြီးအကျယ် နတ်ကနားပေး ကတာ က ဆူညံလွန်းရင် သူများ တွေ မှာ ထိခိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အိမ်ထဲ နတ်ပွဲ ကို ကိုယ့်ဟာကို ယုံကြည်လို့ ကန်တော့ နေသူ ကိုတော့ အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အယူမှားမို့ စေတနာ နဲ့ အမှန်ရောက်အောင်ပြင်ပေးချင်ရင်တော့ သူတို့ ကို ကိုယ်က စပြီး မေတ္တာပြ ပြီးမှ တရားပြ လို့ ရမှာပါ။
ဒီ ဘဝ မှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားစစ် သံသရာပြတ်ကြောင်း ရှာဖို့ ဘဲ ရှေ့တန်းထားနိုင်ရင် ဒီလို ကိုယ့် ကို တစ်စုံတရာက စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာတွေ၊ ဘာတွေ ကို ဂရုစိုက်စရာမလို။
ဒါပေသည့် လောကီနွယ်ပြီးလုပ်တဲ့ အရာတွေ မှာ ချမ်းသာချင်၊ တော်ချင်၊ လှချင် စတာတွေ ပါလာတာမို့ အဲဒီက ဖြစ်တဲ့ လောဘ၊ မောဟ တွေ က နေ အဲဒီလိုတွေ ရဖို့ ကိုယ့် ကို တစ်စုံတရာက စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာတွေ ခံ ချင်၊ လိုချင် လာတာပါ။
သဘောကတော့ လမ်းမှား မှာ အယူမှား ဝင်တာ မဆန်းပါဘူး။
ဒါကြောင့် တကဲ့ကို သံသရာပြတ်ချင် သူတွေ က ရှိသမျှ အစွဲ အားလုံး ကို ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားတာ။
သများ တွေ ကိုသာ ပြောတာ။
အရီးလဲ အခုထိ ချမ်းသာချင်၊ တော်ချင်၊ လှချင် နဲ့ ဒီဘဝ မှာတော့ သံသရာ လွတ်ကြောင်း လမ်းပေါ် ရောက်မယ် မထင်။
အဲဒီ လောဘ တွေ ပြည့်မလား ဆိုပြီး ဟိုရွတ် လိုက် ဒီ ဖတ်လိုက် နဲ့။
ဒီတော့ ဒီလို နတ်ကန်တော့ တဲ့ သူတွေ ကို အပြစ်မဆို ချင်/သင့် ပါဘူး။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုက မစင်တွင်း ထဲ က လောက်တစ်တစ်ကောင် ဖြစ်နေဆဲ မို့ ပါဘဲ။
ထပ်ကွန့်ချင်ဝင်ချင်ပေမဲ့ အချိန်က ဓားမိုး ထားလို့။
အမေက.. မအူပင်သူဗျ ။
အရီးပြောတာလည်း.သဘာဝကျကျ ချက်ကျလက်ကျ မို့ .. တစ်သဘောထဲပါပဲ နော် ။
ဖတ်ရှု ဆွေးနွေးမှု အတွက် ကျေးဇုးတင်ပါတယ်လို့ ….
ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး ခေတ်စားနေတဲ့ အကြောင်းမှတ်လိုက်တာ အလက်ဆင်းရေ
မှန်းချက် လွဲ သွားတယ်ပေါ့လေ
အန်းဒိတ် အကြောင်းအရာ ပါ ။
အရောက် လာ ပြီး ဖတ် ရှု ခံစားပေးသောမမနန်း
ဟီး ဟီး ၃၇မင်းနတ်ထဲမှာ အရက်မသောက်တာဆိုလို့ ကိုရှင်ပဲရှိတယ်…
ကျောက်စ်လည်းအောက်ပြည်အောက်ရွာသား အဖေကလည်း သင်္ဘောသားဖြစ်ပြန်တော့…
ဝါဝင် ဝါထွက် ဦးရှင်ကြီးတင်ရင် ကျောက်စ်ပဲ ပင့်ရတာပေါ့ဗျာ… ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့…
အိမ်ရှေ့မှာ လေးတိုင်စင်နဲ့ နတ်ပင့်ရတာဆိုတော့
ကျောက်စ်လည်း ရှက်ရှက်နဲ့ ခပ်တိုးတိုး နတ်ပင့်လိုက်တယ်…
“Come here U Shin Gyi” ပေါ့… ဟိ
အဲဒီ ဘို ရှင်က
ဘိုလိုလည်း နားလည် တယ်ပေါ့နော်
ကိုးကွယ်မှု နဲ့ အမျှဝေပေးမှု ကို ကွဲကွဲပြားပြား သိကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘုရား တရား သံဃ သာလျှင်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တာတွေကတော့ မယုံကြည်ရင်နေပါ မစော်ကားသင့်ပါဘူး၊ ၃၁ ဘုံထဲကလောကသားတွေ လူသားတွေအပါ ဘယ်သူဘဲဖြစ် အမျှဝေကာ ချစ်ခင် လိုက်ပါ။
နတ်စိမ်း ဘီလူး ပြိတ္တာ တွေက ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိဘူး ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး လို့ပြောတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို တစ်ခုလောက်ပြောပါရစေ သင်္ကြန်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ဘုန်းကြီးတွေပင့်ပြီး ကမ္မ၀ါရွတ်ကြတယ် အိမ်သစ် မြေသစ်တွေမှာ ကမ္မ၀ါရွတ်ကြတဲ့ အခါ ဘုန်တော်ကြီးတွေကမေးတယ်“ ဤအိမ် ဤဥပစာ ဤ၀င်းခြံ ဤနေရာ တွေမှာ လူကိုမူးအောင် ဝေအောင် ရင်တုန်အောင် ဖျားနာအောင် ဖမ်းစားတတ်သော မကောင်းသောနတ်မိစ္ဆာ ဘီလူး ပြိတ္တာ စတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ရှိတာကိုနှစ်သက်သလား မရှိတာကိုနှစ်သက်လား´´ ကဲ အဲလိုမေးတယ်ဆိုကထဲက အဲဒီ နတ်စိမ်း ဘီလူး ပြိတ္တာတွေကလည်း သူ့အထိုက်အလျှောက်တော့ အစွမ်း ရှိလို့ပေါ့။
နောက်တစ်ခုက သေလွန်တဲ့အခါ ဘ၀ကူးမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက် အလှုအတန်းလုပ်ပြီး အမျှပေးဝေ ပေးရင် အဲဒီသေလွန်ပြီး အခြားဘုံဘ၀မှာရှိနေသူက သာဓုခေါ်နိုင်လို့ရှိရင် သူတို့တွေလက်ရှိဘ၀မှာ ပိုပြီး အဆင့်မြင့်လာမယ် ကျွတ်ထိုက်တဲ့သူဆိုရင် ကျွတ်လွတ်သွားကြပြီး ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကို ရောက်တတ်ကြတယ် ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှု့လုပ်ပြီးတိုင်း“အားလုံးကြားကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ပြုနေကြတယ်လေ၊ ဒါဆို အခုပြောတဲ့ ဦးရှင်ကြီးတို့ အိမ်းတွင်းနတ် တို့လည်း လူပေါင်းများ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပူဇော်ကာအမျှပေးနေတဲ့သူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေတော့ သူတို့လည်း သာဓုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ခွင့်ရပြီး အဆင်တွေမြင့်နေပြီလား နတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဘ၀သို့ပြောင်းနေပြီလား သူတို့ သေလွန်ခဲ့တဲ့အနေအထားမှာ ဘဲနှစ်ဘယ်လောက်ကြာကြာရပ်တည်နေပြီလဲ ဘယ်သူအတပ်ပြောနိုင်မလဲ၊ အဲဒါဆို အကယ်လို့များ သူတို့ တွေက စောင့်ရှောင်နိုင်တဲ့ နတ်တွေဘ၀ရောက်ပြီး သူတို့ကိုပူဇော်ပသတဲ့သူတွေကို ပြန်စောင့်ရှောက်နေကြ တာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူဆိုမလဲ။
နတ်တွေ ဘာတွေ မရှိဘူးလို့တော့ ခံမငြင်းနဲ့နော် တစ်နိုင်ငံလုံးကို တီဗွီကနေလွင့်နေတဲ့ တောင်းတန်း သာသနာပြုဆရာတော်ကြီးရဲ ဂုဏ်တော်ကွန်ချာပရိတ်မရွတ်မှီ“တောစောင့်နတ် တောင်စောင့်နတ် မြို့စောင့်နတ် ရွာစောင့်နတ် နဂါး ဂဠန် ဂုက္မန် ရက္ခ ……… အစရှိသည်ဖြင့် ရွတ်ဆိုကာ တရားနာဖိတ်ကြား တာလည်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မရှိဘဲနဲ့တော့ ရွတ်ဟန်မတူပါ။
အဲဒိတော့ ကောင်းသောနတ် မကောင်းသောနတ် ဘီလူး ပြိတ္တာ စရှိသည့် ဘုံ သားတွေကတော့ ရှိတယ်ဆို တာကို ကျမ်းခံတွေမှာလေ့လာရင်တွေ့ကြမှာပါ။ သူတို့ကို ကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ပါ ဒါပေမယ့် မိမိကုသိုလ်ကောင်း မှု့တွေကို အမျှပေးသင့်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာ ၃၁ ဘုံထဲက သတ္တ၀ါတွေပါဘဲ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားက မိမိကောင်းမှု့ကို အမျှပေးတဲ့အခါမှာ ၃၁ ဘုံသားအားလုံးကို အမျှပေးစေဖို့ဘဲ ညွှန်းခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့် သူတို့ကို ဖယ်ကျဉ်းစရာ ရွံရှာစရာအဖြစ် လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး မိမိ မယုံကြည် မကိုးကွယ်ရင်နေပါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးအရ ယုံကြည်သူတွေ ကိုတော့ သူသဘော လို့ဘဲထားလိုက်ပါ။ ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ် အမျှဝေခြင်း မေတ္တာပို့ခြင်း ပြုကြသူတွေ အတွက်တော့ သရဏဂုဏ် ပျက်ဖွယ်မရှိကြောင်း ဟိုတွေးဒီတွေးရေးတာပါ။
ဟုတ်ကဲ့လေး ခ ရေ
ကျွန်တော်က ယုံကြည် ကိုးကွယ်ထိုက်သူတွေ ထဲမှာ
၃၇ မင်း နတ်စိမ်းဆိုတာတွေကို မထည့်ထားပေမဟ့်
ယုံကြည်လို့ ကိုးကွယ်တဲ့မေမေ ကိုတောင်
ပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေ မလုပ်ပါ ။ တကယ် အရေးကြီးတာ လုပ်သင့်တာက
ဘာလဲဆိုတာ တွေးမိစေဖို့ သာ ဝ်ိပဿနာ လမ်းစဉ်တွေကို သတိထားမိရုံ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မေမေ လည်း သူ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ သူ ကိုးကွယ် ချင်တာကို ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်က တော့ ကိုယ် ကိုးကွယ့်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ် ဟာ ကိုးကွယ် ထိုက်လောက်တဲ့
သီလ သမာဓိ ပညာ ရှိမရှိ ကို သေချာ ကြည့်မိတာပါ ။
ဘုရာဟော ကျမ်းဂန်လာ နတ်တွေ နဲ့ အမျှဝေခြင်း ကိစ္စကို ဘာမှ အထူးအထွေ ပြောစရာ မရှိ ။
ဘုရားရှင် ရှိစဉ်အခါက ဘုရားမျက်နှာတော်ကိုပဲ တချိန်လုံးထိုင်ကြည့်နေတဲ့
မထေရ်ကြီး ကို ဘုရားက
ငါဘုရားရဲ့မျက်နှာ တော် အပုပ်ကောင် ရုပ်ကြီးကို ကြည့်နေရုံနဲ့
ငါဘုရား ပြထားတဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံ အားထုတ်မှသာ အကျိုးရှိမယ်
လို့ဟောပြောဆုံးမ စကားကို ဖတ် မှတ်ခဲ့ မိချိန်ကစပြီးးး
ရုပ်တု ကိုးကွယ်မှုကို သိပ်အရေးမကြီးဘူး
လက်တွေ့ ကျင့်စဉ် ကသာ အရေး ပိုကြီးတာ လို့ ယူဆ မိပါတယ်။
ကိုယ်က နတ်ရုပ်တုကို မကိုးကွယ်ပေမယ့် ကိုးကွယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်း
ကျန်တာတော့ အပေါ်မှာ မကြီးပု အဲ
ဘကြီးပု ကို ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ။
“““မင်း … ဘာလုပ်လိုက်စမ်း ၊ ညာလုပ်လိုက်စမ်း
မင်း ဟိုကို သွားလိုက်စမ်း ၊ ဒီကို ဘယ်ချိန်ပြန်လာခဲ့စမ်း
ငါ က ဒါမို့ ၊ မင်းလဲ ဒါ ရမယ်
ငါ ပြောတာနဲ့ လွဲလို့ ကတော့ ၊ နားရင်း ၂ချက် အအုပ်ခံရမယ်သာမှတ် ”””
အဲဒီလို အမိန့် မျိုး ပေးတာကို လိုက်နာမယ့် လူဆိုတာ ၊ ကိုယ့်ဘက်က အစစအရာရာလိုလေသေးမရှိအောင် စပွန်ဆာ မပြတ်ပေးထားတဲ့ လူမျိုးပဲ ရှိမယ် ။ ဒါတောင် ၊ ကိုယ့် စကား ကိုယ့် အမိန့် ကို အပေါ်ယံ ဟန်ဆောင် တာလောက် ပဲ လိုက်လုပ်မယ့် လူတွေချည်းပါပဲ ။